Masitau machena uye machena ekugamuchira mamiriro ekunze akanaka | Bezzia
Masitau machena uye machena ekugamuchira mamiriro ekunze akanaka
Maria vazquez | 10/05/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Tinoda sei mwaka wega wega kukurudzira iwe kuti ugadzire nhema uye chena zvipfeko, mubatanidzwa usinganzwisise mwaka, masitaera kana fashoni. Mubatanidzwa unokunda uyo zvinoita kuti zvive nyore kugadzira mubatanidzwa unokwezva.
Iyo tema uye chena tandem inogara yakakodzera, kunyangwe pazviitiko zvakanakisa; Chero bedzi zita racho risingatauri neimwe nzira, hongu. Mhando dzakasiyana dzehembe dzatinowana mune aya mavara zvakare zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kugadzira zvipfeko zvese zviri zviviri zvakakosha uye maitiro.
Kutsvaga dema uye chena munzira-kutarisa? Kune zvidimbu izvo zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tigadzire akasiyana-siyana musanganiswa, zviri nyore kuchinjika kune akasiyana mamiriro zuva rese. Sutu nhemaSemuenzaniso, yakakodzera kugadzira chimiro chehunyanzvi. Asi kwete chete mumamiriro ezvinhu aya uchakwanisa kutora mukana nazvo.
Yakasanganiswa nechena t-shati, iyo sutu inova sarudzo chaiyo yekunyatso kunakidzwa zuva redu nezuva. Uye zvakare, tinogona kutora mukana we chimwe nechimwe chezvidimbu zvacho zvakasiyana kugadzira zvimwe zvipfeko zvisina kujairika. Pfeka bhachi dema pamusoro pejena jena uye ubatanidze bhurugwa nejuzi rine mitsetse, kupa mienzaniso mishoma.
Jeans kana chinos zvakare sarudzo huru panguva ino yegore. Sarudza yakakosha mamodheru uye uvabatanidze neakasiyana misoro inowedzera kubata kwechimiro kune ako zvipfeko. Unogona kushandisa anozvitutumadza maoko, nezvakarukwa, kana fashoni anodhinda kuzviita.
Kutaura nezve mafashoni prints ... iyo Vichy mifananidzo Vanotibvumira kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe mwaka uno. Iyi pateni ndeye zvinoitika uye nekudaro zhinji nhema uye chena zvipfeko zvine iyi pateni. Enda kupfeka-yenyika dhizaini, kusvetuka kana bhurauzi rakabatanidzwa nemabhurugwa machena. Uye kana pendi isiri yako chinhu, tendeukira kune yakasarudzika, polka dots kana polka dots.
Iwe unofarira zvipfeko zvitema nezvichena here kana iwe unofarira ruvara?
Mifananidzo - @harperandharley, @zinafashionvibe, @lanakashu, @bartabacmode, @anoukyve, @adelinebr, Sarah christine, @chloecleroux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Masitau machena uye machena ekugamuchira mamiriro ekunze akanaka
Maitiro ekuwedzera mapatani kushongedza
5 kudya kwemanheru mazano ekurara zvirinani